Abiy Ahmed Waa Inuu Xilka Ka Dego, Raali-gelina Ka Bixiyo Wixii Uu Sameeyey - Getachew Reda - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaAbiy Ahmed Waa Inuu Xilka Ka Dego, Raali-gelina Ka Bixiyo Wixii Uu Sameeyey – Getachew Reda
Addis Ababa (Jigjigaonline) – Ra’iisal Wasaaraha dalka Itoobiya, Dr Abiy Ahmed ayaa loogu baaqay inuu xilka ka dego, isla markaana uu raalli-gelin weydiisto shacabka.
Abiy Ahmed oo xilka hayey muddo sannad iyo bilo ah ayaa waxa uu la kulmayaa mucaaraddii ugu weynayd, waxaana uu dalku galay xaalad aan degganayn toddobaad ka hor, kaddib markii ay kooxo ka tirsan saraakiisha ciidamadu dileen madaxweynihii maamulka Axmaarada, Taliyihii Ciidamada iyo saraakiil kale, isla markaana ay sameeyeen inqilaab fashilmay.
Getachew Reda oo ka tirsan xisbiga talada dalka haya ee EPRDF, sidoo kalena ah guddida fulinta ee xisbiga iyo xubin fulineed oo ka tirsan TPLF, ayaa waraysi uu siiyey wargeyska Dawladdu leedahay ee Addis Admaz waxa uu ku sheegay in la joogo xilligii Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed iyo xukuumaddiisu ay hor iman lahaayeen shacabka, ayna bannayn lahaayeen xilka iyagoo raalligelin iyo cafis weydiisanaya dadka.
Getagew waxa uu tilmaamay in Abiy Ahmed ay la gudboon tahay inuu tallaabadan qaado, isagoo ku dooday in sida muuqata aanay xukuumaddu diyaar u ahayn inay dalka hoggaamiso.
Getachew Reda waxa kale oo uu Ra’iisal wasaaraha ku eedeeyey inuu baal-marayo nidaamkii midnimada qowmiyadaha ee dalka Itoobiya, waxaanu hadalka Abiy ku tilmaamay sheeko aan ka soconayn dalka oo beer laxawsi ah, taas oo ay ka maqan tahay qorshe iyo aragti maamul.
Waxa kale oo uu masuulkani ka hadlay inqilaabkii fashilmay iyo saraakiishii dawladda ee lagu laayey Addis Ababa iyo Bahar Dar, waxaana uu masuuliyadda dhacdooyinkaas dusha uga tuuray Ra’iisal Wasaaraha oo uu xusay inuu argagixiso iyo dambiileyaal kasoo daayey xabsiyada, kuwiina ay hadda sameeyeen waxa dhacay.
“Maxaad filaysay markaad argagixiso, kuwo aragti gurracan iyo shifto dambiilayaal ah xabsiyada kasoo dayday ee aad waliba garaaddo u xidhay, shacabka iyo hay’adaha ammaankana u sheegtay inay halyeeyo waddaniyiin ah yihiin? Maxaad filaysay markaad sirdoonka iyo jaajuusiinta waddamada shisheeye albaabada u furtay? Maxaad filaysay markaad ogolaatay in sharciga iyo kala dambayntu noqoto mid meel layska dhigay?” Sidaas ayuu yidhi Getagew Reda oo dhaliillo culus u jeedinayey Ra’iisal Wasaaraha.
“Dimuquraadiyaddu maaha sheeko iyo hadal-hayn albaabada u furta burburka waddanka, laakiin waa qorshe iyo nidaam u baahan hindise iyo hirgelin sharci ku sallaysan.” Ayuu mar kale yidhi.
Waxa kale oo uu Getachew sheegay in dalka Itoobiya uu u baahan yahay in la badbaadiyo oo uu khatar ku jiro, waxaana uu ka dalbaday Ra’iisal Wasaare Abiy inuu xilka banneeyo oo uu cafis dalbado haddii aanu dalka maamuli karaynin, waxaanu yidhi: “Saraakiishii la laayay waxay ahaayeen kuwo khatarta u badheedhay, balse dalka ayaa u baahan in la badbaadiyo. Abiy Ahmed, waa inuu dadka hor yimaaddo oo uu raali-gelin bixiyo, cafisna dalbado, haddii aanu dalka maamuli karaynin.”
Getachew Reda ahaa noqonaya masuulkii ugu horreeyey ee ka tirsan xisbiga talada dalka haya ee luuqaddii ugu adkayd kula hadla Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed tan iyo markii ay dhaceen dilalkii iyo inqilaabkii fashilmay, taas oo bannaanka keentay kala-qaybsanaan ka dhex-jirta saraakiisha EPRDF. Sidoo kale, hadalka masuulkani waxa uu si dadban u taabanayaa tabashooyinka ay qabaan qowmiyadaha qaarkood, gaar ahaan Tigrayga iyo Axmaarada, kuwaas oo waayey xilalkii iyo awooddii badnayd ee ay dalka ku lahaayeen tan iyo markii uu Abiy Ahmed noqday Ra’iisal Wasaaraha.
Si kastaba ha ahaatee, waxa Dr. Abiy Ahmed ayaa toddobaadkan magacaabay taliyeyaal beddela saraakiishii dhawaanta la laayey iyo kuwo kaleba, taas oo uu ku adkaynayo ammaanka iyo xasilloonida dalka.
Baarlamaanka Itoobiya Oo Soo Gole-joojinaya Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed Iyo Su’aalaha Adag Ee Sugaya Inuu Ka Jawaabo